OPDOn:Poolisoota nafxanyaa waan keellaa irra hiriirsee dhaabe fakkaata malee Oromoo ta’uu hin danda’anii gochaan isaanii. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOPDOn:Poolisoota nafxanyaa waan keellaa irra hiriirsee dhaabe fakkaata malee Oromoo ta’uu hin danda’anii gochaan isaanii.
OPDOn:Poolisoota nafxanyaa waan keellaa irra hiriirsee dhaabe fakkaata malee Oromoo ta’uu hin danda’anii gochaan isaanii.
Waan OPDOn Oromoo golee Oromiyaa hunda irraa ufata aadaa ufateef alaabaa Oromoo qabatee Irreechaa deemaa jiru daandii irratti rakkisaa jirtu ilaalaan jira.
#Ashaagireen poolisoota nafxanyaa waan keellaa irra hiriirsee dhaabe fakkaata malee Oromoo ta’uu hin danda’anii gochaan isaanii.
Seenaa waggaa 200 keessatti Oromoof araarri maalidhaa ??
Jaarraa lamaan dabarsine kana keessatti meeshaan dhoksaa diinni ittin Oromoo gabroomsaa ture keessa inni hangafti “Araara” jedhama. Diinni Oromoo gabroofate yeeroo Oromoon itti dammaqee injifachuuf tarkaanfii eegalu diinni meeshaa mo’icha isaa “araara” jedhamu ol kaafata. Jarraa lamaaf nafxanyaan kanaan nu gabroofatte. Meeshaan kun meeshaa sagalee hin qabnedha (Silent killer), har’as Oromoon meshaa kanaan ajjeefamee sirbaa jira.
Caalaa Bultume – WAGGADHAN NU GA’I – New Ethiopian Oromo Music 2019
Ethiopia/ Finfinnee: Hin geenyeetu geesse! Abjuu miti dhugaa dha.